UAngela-Amaxesha Anzima Akulindeleyo-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Angela NgoSeptemba 8, 2020:
Ngokuhlwa kwangoku uMama uvele enxibe ezimhlophe qho; Ingubo awayeyisongele nayo yayimhlophe, kodwa ngokungathi iyabonakala kwaye igcwele ukukhanya. Ingubo enye nayo yayigqume intloko. Ezandleni zakhe uMama wayenerosari eNgcwele eNgcwele emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya, isihla isihla phantse ngeenyawo zakhe. Iinyawo zakhe zazize kwaye zibekwe emhlabeni. Ehlabathini kwakukho inyoka evule umlomo, kodwa uMama wayebambe intloko ngonyawo lwasekunene; umsila wayo wawukhulu kwaye wawushukumisa kakhulu. Umama wathi: “Musa ukoyika, kuphantsi kweenyawo zam.”
“Bantwana bam abathandekayo, ndiyabulela ukuba ngokuhlwa nje nibuyele kwihlathi lam elisikelelekileyo ukuze nindamkele kwaye nisabele kweli khwelo lam.
Bantwana, ukuba ndilapha kungenxa yothando olukhulu lukaBawo; ukuba ndilapha kungenxa yokuba ndifuna ukunisindisa nonke.
Bantwana bam, ngokuhlwa kwakhona ndiyanimema ukuba nithandaze. Thandazani, bantwana bam, thandazani, kodwa musani ukwenza oko ngemilebe yenu nodwa: Bantwana abancinci, thandazani ngentliziyo.
Bantwana abancinci, amaxesha anzima alindele nina kwaye eyona nto indivisa kabuhlungu kukuba anikakulungeli konke. Ndicela nindimamele, bantwana: ningabantwana bokukhanya, kodwa ingenguye nonke ovumela ukukhanya endikunike lona ixesha elithile. Ngalo lonke eli xesha ndihleli phakathi kwenu ndinifundise izinto ezininzi, kodwa uninzi lwenu luphulaphula kuphela kwaye aluzisebenzisi iingcebiso zam. Amaninzi ekuqaleni asemlilweni… ze ngokuthe ngcembe lo mlilo ucime okanye ucime. Ewe bantwana, kodwa konke oku kwenzeka ngenxa yokuba nixakekile zizinto zeli hlabathi: niyaziyeka nilahlekiswe lula ngumlawuli weli hlabathi. Bantwana bam, indlela yeNkosi iyindlela egcwele imingxunya, kodwa ukuba ukunye nam, awoyiki nto. Ndikubamba ngesandla kwaye andikushiyi ndide ndibone ukuba uyakwazi ukuhamba; Emva koko kuya kufuneka nenze ezinye nina. Bonisa into endikufundise yona kwabo bangekandazi nabangamazi uNyana wam, uYesu. Ndikufundisile ukuthanda, kodwa awukathandi ngokupheleleyo.
Bantwana abancinci, thandazelani iCawe yam endiyithandayo kunye noMmeli kaKristu: thandaza, thandaza, thandaza.
← Kutheni singenakho ukuthatha “i…
Edson Glauber - Kwi… →